Walaaca Somaliland ka qabto aqoonsiga Mareykanka ee Soomaaliya oo soo xoogeysanaya – idalenews.com
Maamulka Somaliland ayaa dhabar jab xoog leh ku ah aqoonsiga dowladda Mareykanka ay siisay dowladda Soomaaliya muddo 22-sano ah, iyadoo arrintan ay saameyn ku yeelaneyso hankii Somaliland ee ahaa inay noqoto dal ka madax banaan Soomaaliya inteeda kale.
Siyaasiyiinta, mas’uuliyiinta maamulka Somaliland iyo shacabka ayaa siyaabo kala duwan u arkay arrintan, iyadoo noqotay hadal heynta ugu badan maalmihii u dambeeyay ay hareysay goobaha dadka isugu yimaadaan.
Xisbiyada mucaaradka ayaa sidoo kale u arka arrintan mid caqabad ku ah gooni u goosadka Somaliland, halka Mas’uuliyiinta maamulka ay sheegeen in aanay wax saameyn ah ku yeelan doonin.
Shacabka Somaliland ayaa qaarkood ugu baaqay maamulkooda inay dowladda Soomaaliya weydiistaan inay u saxiixaan inay noqdaan dal madax banaan, maadaama ay wada hadalo u socdaan, halka dadaalkii aqoonsiga ay ka raadin lahaayeen caalamka uu u noqon lahaa mid aan lagu guuleysan.
Inkastoo Soomaaliya iyo Somaliland wada hadalo u socdaan, hadana waxaa wali taagan shuruudihii Somaliland ee ahaa in midnimadeeda ay lama taabtaan tahay, isla markaana aanay gor-gortan ka geli doonin arrinta gooni isu taageeda.
Wasiirka Arrimaha dibada Somaliland Maxamed C/llaahi Cumar ayaa sheegay in aqoonsiga Mareykanka uu siiyay Soomaaliya ay tahay arrin iska caadi ah, ayna u arkayeen Soomaaliya in qatar xaga amaanka ah uga imaanayay.
Mareykanka ayaa sheegay in hada kadib maamulada Soomaalida aanay kula dhaqmi doonin siyaasadii laba geesoodka oo maamul walba siyaasad lagula macaamili jiray, hada kadibna Dowladda Soomaaliya ay kula macaamilayaan siyaasada guud.